Dadka Sweden waxay u baahan yahiin afar aduun oo kale - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maroodiga Indonesia ku nool ayaa ug daran duurjoogta qatarta ugu sugan cirib-goynta. Foto: S. Yulinnas/AP
Dadka Sweden waxay u baahan yahiin afar aduun oo kale
WWF: xayewaanka aduunka saddex meelood labo waa la weyn doonaa sannadka 2020
Publicerat torsdag 27 oktober 2016 kl 12.43
Badeecadaha ay dadka Sweden iibsadan inta ay tirade ka badatay ayey haddii sidaan ku sii socoto waxay qasab ka dhigeysaa in loo baahdo afar adoon oo kale, sidas waxaa warbaxintooda Living Planet ku sheegay ururka WWF.
Ururka ayaa sheegay in badeecadaha ay bini’aadamka isticmaalayaan ay qatar ku tahay nolasha duur-joogta.
Ururka duurjoogta aduunka laantiisa ayaa kaalinta qatarta ka dhanka ah bay’adda iyo duurjoogta ku tilmaamay badeecadaha ay Sweden ka soo dhoofiyso dibadaha. Håkan Wirtén waa xoghaya guud ee ururkan laantiisa Sweden
– Badeecado badan ayaa dibadaha ka soo dhoofsanaa, gaar ahaan sida shidaalka qadiimka ah. Sweden aad ayaa hilibka looga cunaa waana soo dhuufsanaa. Sidaas daraadeed Sweden waxay ku jirta kaalin aad u liidata liiska waddamada qatar ku ah bay’adda iyo duurjoogta.
Warbaxinta Living Planet ayaa ururka WWF soo saaraa labadii sanno mar taas oo lagu eego sida badeecadaha ay dadka adeegsadan u saameyso bay’adda iyo noolaha duurjogta ah
Warbaxintan oo iska-kaashadeen WWF iyo urur kalo oo la yiraahdo the Zoological Society of London waxaa lagu xusay in ay 60% yaraadeen xayewaanka duurjoogta ah marka loo barbarbdhigo tiradii ay duurjoogta aduunka aheyd sannadkii 1970kii.
Warbxinta waxay ka digtay haddii arrintu sidaas ku sii socoto in duurjoogta caalamka ku nool la weyn doono saddex meelood labo sannadka 2020. Iyadoo xayewaanka la weyn doono ay u badnaan doonaan xayewaanada ku nool dhul biyoodka sida webiyada, waraha iyo dhulka sidiisa kale u qoyan.
Cilmibaarayaasha ay u aaneynaya hoos u dhaca xawayaanka duurjooga ah hawlaha aadanaha, sida beerashada, ugaarsiga iyo weliba suntan hawada lagu sii daayo.
Ururka WWF ayaa ugu baaqaya Sweden yareynta badeecadaha ay dibadaha ka soo dhoofsato.
– Gaar ahaan waan in yareyno badeecadaha cuntada ah ee soo dhoofsano. Dowladda waa in ay dejiso istaraajiyed cusub oo lagu yareynayo hilibka ay dadka cunaa, waayo hilibka kaalin weyn ayuu ku leeyahay saameynta aadanaha ku hayo bay’adda iyo cimilada, ayuu yeri Håkan Wirtén xoghaya guud ee ururka WWF Sweden.